Home » Lahatsoratra farany farany » Vaovao Mafana » Vaovao Mafana Alemana » Sidina mivantana avy any Munich mankany Dubai any Lufthansa izao
Airlines • Airport • Aviation • Vaovao Mafana Eoropeana • Vaovao Mafana • Vaovao momba ny fitsangatsanganana • Fitsangatsanganana an-trano • Vaovao Mafana Alemana • Vaovao • Tourism • Dinika fizahan-tany • Fitaterana • Fanavaozana ny tanjon'ny dia • Tsiambaratelo momba ny dia • Travel Wire News • Vaovao farany UAE • Vaovao isan-karazany
Noho ny filàna be dia be, Munich no foibe fahatelo an'ny Lufthansa Group nanampy an'i Dubai amin'ny fandaharam-potoanan'ny sidina, aorian'ny Frankfurt sy Zurich.
Lufthansa dia nanambara ny zotra UAE vaovao.
Nanomboka tamin'ny 1 Oktobra 2021, dia nanidina tsy an-kijanona avy any Munich mankany Dubai i Lufthansa.
Sidina telo isan-kerinandro miaraka amin'ny Airbus A350-900.
Raha te hanitatra ny fahavaratra ianao dia izao no fotoana mety indrindra hanaovana izany. Ara-potoana amin'ny ririnina antsasak'adiny ary mifanandrify amin'ny fisokafan'ny EXPO, Lufthansa dia miainga avy any Munich mivantana mankany Dubai.
Manomboka amin'ny 1 Oktobra ka hatramin'ny 23 aprily - ny faran'ny fialantsasatry ny Paska any Bavarian - Airbus A350-900 dia hisidina intelo isan-kerinandro mankany amin'ny Golfa Persiana.
Ny LH 638 dia manomboka amin'ny ora sidina mety: Ny fiainganana avy any Munich dia amin'ny 10:30 alina, tonga any Dubai amin'ny 6:40 maraina ny ampitso. Miala amin'ny 8:30 maraina ny sidina miverina ary tonga any Munich amin'ny 12:50 hariva
“Faly izahay fa afaka manolotra toeran-kaleha manintona anay ho làlana vaovao avy any Munich voalohany hatramin'ny nanombohan'ny areti-mandringana. Noho ny filàna be dia be, Munich no foibe fahatelo an'ny Vondrona Lufthansa hanampy an'i Dubai amin'ny fandaharam-potoanan'ny sidina, aorian'ny Frankfurt sy Zurich. Ary sambany, ny mpandeha anay dia afaka mivezivezy avy any Munich mankany Emirates amin'ny fiaramanidina maharitra maharitra ao anaty fiaramanidina misy antsika: ny Airbus A350-900, "hoy i Stefan Kreuzpaintner, Lehiben'ny hub Munich ary Head of Sales ho an'ny Vondrona Lufthansa.
Lufthansa dia efa nanidina avy tany Munich ho any Dubai tamin'ny 2003 ka hatramin'ny 2016, vao haingana niaraka tamin'ny Airbus A330.
Ny fahasalamana sy ny fiarovana ny mpandeha no laharam-pahamehana ho an'i Lufthansa. Ny serivisy atolotra an-tsambo sy ny fomba fanao alohan'ny sy mandritra ny sidina dia namboarina tamin'ny fepetra takian'ny lalàna ankehitriny. Ankoatra ny zavatra hafa, io dia mihatra amin'ny lalàna lavitra momba ny fidinana sy ny fidinana ary ny adidy manao sarontava ara-pitsaboana. Ny sivana Hepa koa dia manadio ny rivotra anaty kabine, azo ampitahaina amin'ny efitrano fandidiana.